I-url Mal: ukuthi kuyini nokuthi ukususa?
Ngakho, namuhla sizobe ukwethula kini ukuba Url Mal. Kuyini lokhu? Indlela ukuqeda lokhu ukutheleleka? Lapho kutholakala? Kanjani computer lapho igciwane lingena ohlelweni lokusebenza? Konke lokhu manje, futhi kuzoxoxwa. Mhlawumbe kufanele uqale ngemibuzo kakhulu elula.
Hlobo luni isilwane?
I-url Mal - kuyini? Ake sizame ukuqonda lesi sihloko. Kuyinto njalo kubalulekile ukwazi ukuthi yiluphi uhlobo igciwane itheleleke ohlelweni. Lokhu kusiza ukuqeda le nkinga. Ngezinye izikhathi ngisho nangaphambi computer abanye igalelo sina kuzobhekwana.
I-url Mal - kuyini? abasebenzisi Ordinary abangekho ujwayelene ikhompyutha ukutheleleka, kungase kubonakale sengathi isicelo wadala ukubhekana ukukhangisa. Eqinisweni, akulutho like ogaxekile yangempela. Lahla bekuyoba nzima ukusuka kuye. Ikakhulukazi uma isikhathi kungaqali ukulwa ezifweni.
Uma wazi lokho isigelekeqe browser, kungase futhi kwenziwe isibaluli lolu hlobo igciwane Url Mal. Kuyini lokhu? Lolu hlelo lokusebenza, elikwaziyo ukuntshontsha idatha afakwe lesiphequluli. Ngaphezu kwalokho, abaduni shintsha ikhasi isiqalo kuzilungiselelo, kodwa namanje ukusinika inqwaba banner izikhangiso kuwo wonke amakhasi. Kungase kwenzeke, futhi ukuze ngisho evulekile kwamathebhu ahlukene kusiphequluli sakho, ngokukhangisa. Ngakho manje ukuthi siyazi impendulo yalo mbuzo othi: "? Url Mal - kuyini", Ake sizame ukuthola lapho ungakwazi ukuhlangabezana nale ukutheleleka.
Ngakho, lapho enza enye yalezo zimpi eyalwiwa nge virus sethu samanje? Yiqiniso, akukho indawo okuzivikela amagciwane. Noma kunjalo umyalezo: "I-url isifo Mal" pops up njalo ngemva kokuvakashela nezigaba ezithile imithombo kuwebhu. Ake sibone ukuthi yini izindawo abaholi yangempela leli bhizinisi.
Umthombo wokuqala igciwane - kuba Yiqiniso, ukukhangisa amasayithi, futhi ezihlukahlukene amabhanela. Ngezinye izikhathi nje uchofoze ngokushesha - futhi isistimu yakho itheleleke. Qaphela lapho bedlula izixhumanisi entsha namakheli osolisayo. Futhi, musa bakhohliswa okuthunyelwe kusuka esigabeni: ". Thenga incwadi yethu futhi tryin 2 amaviki" Lena ogaxekile abaningi, ngempela into ithelela ohlelweni. i "ilungiselelo" okunjalo.
indawo Okwesibili, lapho ungakwazi ngokuvamile ukwenza igciwane - kuba Yiqiniso, ukusebenzisa zonke izinhlobo thwebula abaphathi. Bathola futhi ukufaka isofthiwe enonya ngaphandle kolwazi yomsebenzisi. Futhi-ke, njengoba umthetho, nawu umbuzo: "I-url Mal - Indlela yokuphatha kulo?" Zama ukugwema okuthiwa "ukulandela".
Umthombo wesithathu amagciwane - Yebo, i-software pirated, kanye izinhlobo ezahlukene crackers. Ukufaka kubo ufuna ukukhubaza unqulo wesi arab. Lona ithuba elikhulu ukutheleleka. Ngakho ungamangali uma, ngemva kokuhlephula Uhlelo uzoqala njalo uthole umlayezo: "I-url Mal KWAMAGUNDANE" Futhi manje ake sibone indlela lokhu kubonisa ukuthi ukutheleleka wangena ohlelweni.
Nokho, esikwaziyo kakade impendulo yombuzo: "? Url Mal - kuyini" Manje ake sibone ukuthi yini, ukuthi baziphathe kanjani computer emva wayezoboshwa itheleleke. Ngempela, ngezinye izikhathi kuba ngoba lezi zimpawu kungaqondakala ukuthi sikhathi ukuze alungiselele ukulwa igciwane.
Uphawu lokuqala, okuyinto ngokuvamile kuyabonakala kuwo wonke amakhompyutha - kuyinto ukuvela amabhuleki. Okukhathazayo ukuthi manje inqubo ithatha isikhathi eside. Ngokwesibonelo, ukuvula computer ngeke kuthathe amaminithi ambalwa. Lona alamu kuqala.
I Kwesesibili - kuba Yiqiniso, ukuvela izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba izinhlelo ohlelweni. Ukuphishekela konke lokhu kwenza labo ongazange download bese usetha. Kwesinye isikhathi abasebenzisi akudingeki ukuzwa mayelana nokuba khona kwamakamu leyonto equkethwe. Hhayi-ke, uma uqaphela Url Mal isicelo, ungakwazi Akungabazeki uqale ukuthola impendulo yombuzo kanjani ukuqeda lokhu ukutheleleka.
Isignali yesithathu - kuyinto ukuvela lenqwaba ukukhangisa amabhanela kusiphequluli. Ngaphezu kwalokho, ngisho asivulele amawindi amasha. Qala ikhasi kusiphequluli, njengoba umthetho, futhi, siyashintsha. Siqaphele lokhu kuziphatha ohlelweni lwami? Ungacabanga ngombuzo: "Kube igciwane Url Mal Indlela ukususa?"
Ngakho, lapho impi iqala nge lonke ukutheleleka khompyutha? Yiqiniso, ne uhlelo lokusebenza iskenele amagciwane isofthiwe enonya. Ngakho lapho kuyodingeka uqale ngayo lesi sinyathelo.
Ukuze balahle Url Mal, udinga i-anti-virus ezinhle. Nod32 ephelele. Uma ungathandi, bese usebenzisa Dr.Web. Yenza ezijulile uhlelo scan. Ngemva kwalokho okwelapha zonke izinsongo itholiwe. Yini akwelapheki, umane ususe.
Kungaba kuhle ukuba futhi usebenzise uhlelo Spy Hunter ukuthola nokususa spyware. Lapho yokuqinisekisa ezinjalo, ematfuba kule mpi ngokumelene Url Mal izokwenyuka. Iskena sifana scan uhlelo besebenzisa amagciwane. Lapho zithwetshulwa sigcwaliswe, ungakwazi uqhubekele namaqhinga kancane ukuthi uqiniseka ukusisiza kule ndaba.
Call ebhukwini sekhompyutha usebenzisa Win R futhi "regedit" umyalo. Chofoza "Hlela" bese ukhetha "Ukucinga." Ngo ewindini elivelayo, thayipha "Url Mal" bese uqale test. Susa yonke imiphumela. Lona iqhinga kuqala.
Chofoza ngakwesokudla isithonjana yesiphequluli sakho bese ukhetha "Properties." Skrola "into" ifasitela kuze kube sekupheleni, bese ukususa sokungena ngemvume izingcaphuno ikheli ngabanye. Londoloza izinguquko zakho.
Futhi, ukususa usebenzisa "Control Panel" zonke izinhlelo ufake igciwane. Lokhu kuzosiza ukuqeda lesi sifo kanye qha kwenela. Manje usungakwazi iqalise. Yilokho. Manje uyazi impendulo yombuzo othi: "I-url Mal - kuyini?", Kanye izindlela zokunqanda lesi sifo.
Kanjani ukuba angaweli ngoba lolo ka angadingeki nemikhonyovu SMS
Indlela ukufaka Epoch Dayz kukhompyutha yakho?
Advanced PC Ukunakekela: kanjani ukususa igciwane? imiyalo ephelele
Siphatha igciwane Vkontakte
Indlela yokuvula i-umsindo kumodi ephephile kunoma iyiphi ohlelweni lwe-Windows
Indlela yokuvula itheku elisogwini imodemu
Wamafutha "Erythromycin" - i-antibiotic ezingabizi futhi eziphumelelayo
Imfucuza - Iyini?
Iron: isakhiwo ye-athomu, isikimu kanye izibonelo. Isakhiwo electronic yase-athomu lokusansimbi
Vegetable isobho amadombolo: incazelo enemininingwane nezindlela wokulungiselela
Braga ngamagilebhisi: yi ezithakazelisayo
Uwoyela Castor ukuze ahlanze wamathumbu. Ukuhlanzwa lamafutha ocolisekileyo: Izincomo